Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha ODM oo maanta kulan la qaadanaya siyaasiyiinta wadanka – Radio Damal
Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha ODM oo maanta kulan la qaadanaya siyaasiyiinta wadanka
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa lagu wadaa inay maanta xildhibaanada baarlamaanka iyo xubnaha aqalka sare kulan kula yeeshaan magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru.
Shirka ayaa diiradda lagu saarayaa tallaabada xigta ee la qaadanaya maalmo un kaddib markii la soo bandhigay warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta dadweynaha ee BBI.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Amos Kimunya ayaa sheegay in kulanka maanta xildhibaanada iyo senatarrada si buuxda loogu fahansiin doono qodobbada ku xusan warbixinta BBI.
Kimunya ayaa intaa ku daray in sidoo kale ay shirka Naivasha ka furmaya ka qayb geli doonaan khuburro dhanka sharciga oo faahfaahin ka bixinaya geedisocodka BBI , qodobbada kala duwan ee lagu soo jeediyay iyo sida ay xal ugu noqon karto caqabadaha wadanka ka jiro .
Waxaa sidoo kale la eegi doonaa waxyaabaha guddiga BBI uu ka yiri sagaalkii qodob ee ay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha ODM Raila Odinga u heshiiyeen 9-kii bishii saddexaad ee sannadkii 2018-kii xilligaas oo ay yeesheen kulan taariikhi ahaa.
Heshiiskaas oo yimid kaddib doorashooyin lagu kala qaybsamay ayaa dalka xasilooni siyaasadeed u horseeday.
Kulanka maanta qabsoomaya ayaa ku soo aadaya iyadoo mudanayaasha baarlamaanka iyo senatarrada ay ku kala aragti duwan yihiin warbixinta.
Qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa dareensan in soo jeedinta guddiga BBI lagu dhimay awooddooda dastuuriga ah.
Amos Kimunya ayaa hoosta ka xarriiqay in aan maanta laga wada hadli doonin wax lagu kordhinaya ama laga saaraya warbixinta BBI.
Hasa ahaate hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare Samuel Poghisio ayaa dhankiisa sheegaya in cid kasta oo aan ku qanacsanayn warbixinta maanta laga dhaadhicin doono faa’iidooyinka laga dhaxlaya dhaqangelinta warbixinta.
Senatarka ismaamulka Bungoma ahna madaxa xisbiga Ford-Kenya Moses Wetangula ayaa doonaya in si qoto dheer looga wada hadlo kuraas dheeraad oo lagu wado in baarlamaanka lagu soo kordhiyo.
Senatarka dowlad deegaanka Homa Bay Moses Kajwang’ ayaa dhankiisa xusay in loo baahan yahay in dib u eegis xaddidan lagu sameeyo warbixinta guddiga BBI si loogu wada heshiiyo ka hor inta aan la qaban afti dastuuri ah.